Kedu Engines Nchọpụta Na-agụ ... | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 3, 2008 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Douglas Karr
Nchọpụta engines na-enyocha peeji nke nwere algọridim dị mgbagwoju anya nke na-atụle ụda nke mgbanwe dị iche iche, ma n'ime ma nke dị na peeji nke gị. Echere m na ọ dị mkpa ịmata ihe ndị bụ isi ihe Injin ọchụchọ na-etinye anya na, agbanyeghị. Imirikiti n'ime ha bụ ihe ndị ị nwere njikwa zuru oke mgbe ị na-eme atụmatụ ma ọ bụ na -emepụta saịtị gị ma ọ bụ naanị dee ibe gị. Nke a bụ agbanyeghị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ broshuọ azụmaahịa, blog, ma ọ bụ saịtị ọ bụla ọzọ.
Ihe dị mkpa maka njikarịcha njin nchọgharị
Tupu SEO ụmụ nwoke na-agụ m blog adọwa m - M ga-atụfu a disclaimer si n'ebe… nke a bụ nanị a akụkụ nke ihe a SEO ọkachamara ga-a attentiona ntị mgbe akafiakde na tweaking gị na saịtị. N'ezie, enwere ihe ndị ọzọ dịka mkpado meta, Ntinye HTML, na saịtị ewu ewu. Isi okwu m bụ iji mee ka onye nrụpụta weebụsaịtị ma ọ bụ onye nwe azụmaahịa mara ụfọdụ isi ihe nwere ike gbanwee ngwa ngwa.
The aha peeji gi ga-emet uta ot well ue si debe peeji ah u nke oma. Jide n'aka na-ahu nagide Keywords gị na peeji nke aha na-etinye gị blog ma ọ bụ saịtị na aha nke abụọ.
your ngalaba aha metụtara ntinye gị Ọ bụrụ na ị chọrọ n'elu pụrụ isi chọta maka kpọmkwem Keywords ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu, na-eche banyere incorporating ha n'ime gị na ngalaba aha.
Zipu slugs ndị dị mkpa ma nwee ike iji leverage Keywords na nkebi ahịrịokwu. M na-agbalị iji a gbara ọkpụrụkpụ isiokwu na-adọta ndị na-agụ ma m post slugs na-na-gbanwetụrụ maka search engines.
The isi isiokwu (h1) nke ibe gi na-ebuwanye ibu n'ime ọdịnaya nke engines na-enyocha. Ebe ntinye (est) na HTML ga-emetụtakwa ndeksi.
Dị ka isi isiokwu, a isiokwu nta (h2) ga-emetụtakwa ndeksi nke ibe a.
The aha nke post gị, ma ọ bụ isiokwu nta ndị ọzọ ga-emetụta ihe isiokwu na ahịrịokwu ahịrịpụtara na etu esi eme nke ọma.
Na-emegharị isi okwu na nkebi ahịrịokwu igodo n'ime ọdịnaya dị mkpa. Ekwesịrị ịtụle mkpụrụ okwu ndị a na ahịrịokwu ndị a iji hụ ma ha bụ mkpụrụokwu na ahịrịokwu ndị nwere ike ịchọ.
Ekele Keywords na nkebi ahịrịokwu ndị bụ isi ga-enyekwa aka.
ọzọ isi okwu (h3) na-enyekwa aka ma nwee ike ịtụle karịa okwu ndị ọzọ n'ime ọdịnaya ọdịnaya.
Tinye n'ọrụ nkebi ahịrịokwu na Keywords n'ime ihe arịlịka mkpado (njikọ), bụkwa ụzọ dị mma iji kpoo isiokwu na ntinye okwu keyphrase na ibe. Ekwela ihe bara uru a na "pịa ebe a" ma ọ bụ "njikọ"… kama, jiri aha na ederede mee ka mmekọrịta dị n'etiti njikọta na nkebi ahịrịokwu ahụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m chọrọ ka ngalaba m metụtara ahịa na teknụzụ, m ga-achọ ijide n'aka iji:
Dị nnọọ ka njikọ njikọ arịlịka, itinye mkpado aha n'ime njikọ ihe oyiyi na-enyekwa aka. Ebe ọ bụ na engines ọchụchọ agaghị enwe ike depụta ọdịnaya nke onyonyo (ma), ịgbakwunye isiokwu ejiri isiokwu ga-enyere aka karịa - ọkachasị ma ọ bụrụ na mmadụ na - eji Nchọta Foto nke Google.
Aha onyonyo dị mkpa. Hụ na ị na-eji kụriri akụ ma ghara imesi ike n’etiti mkpụrụokwu dị na foto ahụ. Jide n'aka na aha onyonyo dabara na oyiyi ahụ… na-anwale itinye mkpụrụ okwu n'ime onyonyo nke na-adịghị mkpa nwere ike imerụ karịa inye aka.
Tags: arịlịka mkpadoarịlịka mkpado ederedeihe ngigidengalaba ahaH1 mkpadoH2 mkpadoH3 mkpadoisiImageaha oyiyinkebi ahịrịokwuisiokwu ojijiKeywordsaha peejibiputere slugspost ahaisi okwuaha peeji
Feb 4, 2008 n’elekere 2:01 nke abali
Ewezuga eziokwu ahụ na ọ bụrụ na ịchọrọ iji nkebi ahịrịokwu na-ezighi ezi ịmalite, ọ baghị uru, echere m na ị nwetara ọtụtụ n'ime ya.
Ọrụ zuru oke.
Feb 4, 2008 n’elekere 11:08 nke abali
Amara! Isi okwu ahọpụtara m bụ maka nlele anya, SEO!
Feb 4, 2008 n’elekere 10:09 nke abali
Knowingmara SEO na ịkọwa ya n'okwu nke mmadụ bụ anụmanụ abụọ dị iche iche. Gbalịa ka m nwere ike, a ga m enweta ụfọdụ ihu na-enweghị isi mgbe m gbalịrị ike m niile ịkọwa ihe igwe ọrụ ọchụchọ na-achọ, otu njikọ dị mkpa, yana ihe kpatara isiokwu aha ji dị mkpa. Ọ bụ ọrụ m igosipụta echiche ndị ahụ n'ụzọ dị nkenke, n'ụzọ dị mfe nghọta. Edemede a nyere m aka nke ukwuu. Nnukwu ọrụ.
Feb 4, 2008 n’elekere 11:09 nke abali
Daalụ, Dan! Ọ bụụrụ m ike ma m na-aga n'ihu ịnwa ịkpụzi ya. Echere m na m ka mma na mmadụ, ọkachasị n'ihi na m nwere ike ịtụgharị mmụọ mgbagwoju anya nke ndị folks m na-agwa.